musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kazakhstan Breaking News » Vols kubva kuKazakhstan zvinotangazve kune gumi nematanhatu nyika izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Azerbaijan Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Czechia Breaking News • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Italy Kuputsa Nhau • Kazakhstan Breaking News • Kuwait Kuputsa Nhau • Maldives Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • Sri Lanka Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Uzbekistan Kupwanya Nhau
Khomisheni yeHurumende yaita danho rekuwedzera uye kutangazve basa repamhepo repasi rese kubva kuKazakhstan kuenda kunyika gumi neshanu pasirese nekuwanda kwendege gumi nemana pavhiki.
Vakuru vehurumende yeKazakhstan vanozivisa kutanga kwebasa remhepo nedzimwe nyika dzinoverengeka.
Vatakuri veKazakh vachawedzera mafambiro ekubhururuka kuenda kuRussia, Turkey, Uzbekistan, Germany uye United Arab Emirates.
Ndege kubva kuKazakhstan kuenda kuCzech Republic, China, Italy, Sri Lanka, Kuwait neAzerbaijan zvakare zvinotangazve.
Vakuru kubva kuKazakh Intergovernmental Commission yekudzivirira kupararira kwecoronavirus vakazivisa kuti vagari veKazakhstan vava kukwanisa kubhururuka vachienda kune dzimwe nyika gumi neshanu, kutanga musi waGunyana 16, 21.
Komisheni iyi yaita danho rekuwedzera uye kutangazve basa repasi rose rezvemhepo kune nyika gumi nenhanhatu pasirese nendege dzinosvika 16 pasvondo.
Nokudaro, Khazakisitani yakawedzera mafambiro ekuenda kuRussia ne54, ne7 kuenda kuTurkey, ne9 kuenda kuUnited Arab Emirates, ne5 kuenda kuUzbekistan neGerman, ne3 kuenda kuMaldives, Kazakh Civil Aviation Committee's Telegraph Channel yakazivisa.
Kazakhstan yakatangazve kutiza ichienda kuCzech Republic, China neAzerbaijan. Kunze kwezvo, kuchave nendege kubva kuKazakhstan kuenda kuItari kaviri pasvondo, uye nendege kubva kuKazakhstan kuenda kuSri Lanka neKuwait katatu kusvondo.
Kazakhstan mureza anotakura, Air Astana, nhasi yazivisa kutangazve kwendege dzakananga kubva kuAlmaty kuenda kuMale (Maldives) kubva musi wa9 Gumiguru 2021. Ndege dzinozoitwa kane pavhiki neChipiri, China, Mugovera neSvondo paAirbus 321LR neBoeing 767.
Air Astana yatanga nendege kuenda kuMaldives musi waZvita 5, 2020, uye ikashanda kusvika Chivabvu 24, 2021 isati yamiswa nekuda kwezvirambidzo zvehurumende. Sekureva kweBazi rezveKushanya kweMaldives, Kazakhstan yakapihwa chinzvimbo cheshanu nenhamba yevashanyi vakasvika kuMurume pakati paNdira naMay 2021 mushure meRussia, India, Germany neUkraine.